Existence Magazine – Vol.1, Issue.5 – Download | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
Existence Magazine – Vol.1, Issue.5 – Download	Posted by mm thinker on October 12, 2008
Posted in: Download, Existence Magazine.	Tagged: Download, Existence Magazine.	6 Comments
PDF Format File Size: 9.09 MB
← အနုပညာနှင့် ဖန်တီးခွင့်	အချစ်ဆိုသည်မှာ… →	6 comments on “Existence Magazine – Vol.1, Issue.5 – Download”
မစ်(စ်)သွန်းသွန်း on October 12, 2008 at 1:37 pm said:
ဦးဆုံး ဒေါင်းသွားပြီဝေ့။ ဖတ်ပြီးမှ ကွန်မက်လာပေးမယ်။🙂
Reply	ShwunMi on October 13, 2008 at 5:15 am said:
ညကတည်းက မြင်ပါတယ်။ ဆွဲချပြီး ဖတ်ရင်း အိပ်ပျော်သွားလို့ .. ခုမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း လာပြောရတယ်။🙂
ဖွဲ့တည်ရာ အဖွဲ့သားများရဲ့  စေတနာကို လေးစားလျက်ပါ။
ဖွဲ့တည်ရာ ၀ိုင်းတော်သားများကိုရော စာရေးဖြစ်အောင် တိုက်တွန်းအားပေးတဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကိုပါ ဒီကနေ တစ်ခါတည်း ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်။
အပြီးထိ မဖတ်ရသေးပေမယ့် ဖတ်ပြီးသလောက်ကို ကြိုက်ပါတယ်…
ကာတွန်းတွေရယ်.. ကိုဟန်သစ်ငြိမ်ရဲ့  နေ့နဲ့ည ရယ်.. သွန်းသွန်းရဲ့  အသည်းတစ်ခြမ်း နဲ့ ကဗျာကို ကြိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မနွေရဲ့  လူသားနှင့် ခံစားခြင်း အနုပညာကိုတော့ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ်။
Dr. သန်းထွန်း ဆောင်းပါး ကြိုက်တယ်။
ကွိကို မြည်းရင်းနဲ့ အချိန်တော်တော်လင့်သွားလို့ ပြီးအောင်တော့ ဖြည်းဖြည်းပဲ ဖတ်ရမယ် ထင်ပါတယ်🙂
Reply	ညိမ်းညို on October 15, 2008 at 2:52 pm said:
ပြည့်စုံကောင်းမွန်လွန်းလှတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ကို ဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် စီစဉ်သူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အစကနေ အဆုံးတိုင်အောင် ကဏ္ဍတိုင်းဟာ နှစ်သက်စရာတွေချည်းပါပဲဗျာ။ မပန်ဒိုရာရဲ့ မြေအုတ်များ ကျောက်အုတ်များနှင့် သွေးစက်နီနီ ၀တ္ထုတိုကို တအားနှစ်သက်မိပါတယ်။
Reply	layma on October 18, 2008 at 4:37 pm said:
cover design ကိုအကြိုက်ဆုံး…။
Reply	ကက်တီ on October 21, 2008 at 8:39 am said:
ဒီတစ်ပတ် ကဗျာလေးတွေ တော်တော်များများကို ကြိုက်တယ်။ မကြိုက်တာတွေလည်း ရှိတာပေါ့။ ကျော်ညိုသွေးရဲ့ ရည်စားစကားထဲမှာ..လှေနံနှစ်ဖက်နင်းရင် ငါ့ဘက် နာနာ နင်းစမ်းပါ..စာသား အရမ်းရင်းနှီးနေသလိုပဲ။ ပန်ဒိုရာရဲ့ ဆောင်းပါး ကြိုက်ပါတယ်။ ဟန်သစ်ငြိမ် ဆောင်းပါးကို အရင်ကတည်းက ဖတ်ပြီးသားဆိုပေမယ့် နည်းနည်းလေး ပြောင်းသွားသလိုပဲ။ ဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ်။ လောင်ကျင်စိန်ရဲ့ လက်ညှိူး အကြော်း ဖော်ပြသွားတာကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ မြန်မာဝီကီအကြောင်း ဖတ်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မှော်ဆရာရဲ့ ဘလောဂ်အကြောင်း ဖတ်ရတာလည်း ကြိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ရိုးသားမှု အကြောင်း ရေးထားတာ ကြိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်က စိုင်းစိုင်း ဖန်ပါ။ ..ကြိုက်ပါတယ်..အတော်များများကို ကြိုက်ပါတယ်..
Reply	မသက်ဇင် on January 21, 2009 at 4:19 pm said:
Myanmar Sar	Blog Stats	255,104 License	MM Free Thinker by mm thinker is licensed underaCreative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.Based onawork at mmfreethinker.wordpress.com.Permissions beyond the scope of this license may be available at https://mmfreethinker.wordpress.com/. Myanmar Knote Credit-Art House Graphic Studio, Mandalay, Myanmar. Createafree website or blog at WordPress.com.